Iràka 22 Novambra 2017
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 21 Novambra 2017
Afganistana 20 Novambra 2017
Bitsibitsika Afgàna: Ny Tsy Fandriampahalemana & Fanavakavaham-bolokoditra
Azia Afovoany sy Kaokazy 18 Novambra 2017
Niresaka momba ny tsy fisian'ny fandriampahalemana ao amin'ny firenena sy ny fipoahana baomba vao haingana ireo bilaogera Afgàna vitsivitsy. Hojerentsika ny vitsivitsy amin'izy ireo.
Azia Afovoany sy Kaokazy 17 Novambra 2017
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 17 Novambra 2017
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 16 Novambra 2017
Dolara Amerikana, Zon'Olombelona & Ady
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 14 Novambra 2017
Miresaka lohahevitra mafana i Mehrangize Kar, mpikatroka ny zon'olombelona, ​​mpisolovava & bilaogera monina any Etazonia: 75 tapitrisa dolara Amerikana manampy amin'ny fampiroboroboana ny demaokrasia ao Iran. Tsy mino izy fa afaka manampy ireo mpikatroka ny zon'olombelona Iraniana ny dolara Amerikana.
Azia Afovoany sy Kaokazy 14 Novambra 2017